Khilaafka u dhaxeeya Jarmalka iyo Turkiga oo sii xoogaystay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Khilaafka u dhaxeeya Jarmalka iyo Turkiga oo sii xoogaystay
Khilaafka u dhaxeeya Jarmalka iyo Turkiga oo sii xoogaystay
Khilaafka u dhexeeya Turkiga iyo Jarmalka ee ku saabsan xadhiga qof u dhaqdhaqaaqa xuquuda aadanaha oo Turkigu xidhay ayaa sii xoogaysanaya.
Wasiirka arimaha dibadda Turkiga, Mevlut Cavusoglu, ayaa cambaareeyey hadal ka soo yeedhay dhigiisa Jarmalka oo Turkiga ku sheegay meel aan nabad ahayn oo aan la tegi karin ama aan laga ganacsan karin.
Wasiirka arimaha dibadda Jarmalka, Sigmar Gabriel, ayaa dhowaan Ku dhawaaqay digniin xaga socdaalka ah oo dadka iyo shirkadaha Jaramalka ah ugu digay in ay dib u eegaan qorshayaashooda ay ku doonayaan in ay ku maal gashadaan Turkiga.
Wasiirka ayaa sheegay in muwaadiniinta Jarmalka ee booqda dalka Turkiga ay wajihi karaa in ciidamada ammaanka Turkiga ay xiraan.
Waxaa uu sheegay in Turkiga haatan uu bilaabay dadka caadiga ah uu uga shakiyo inay maleegayaan dhibaato liddi Ku ah ammaanka dalkaasi.
Dowladda ayaa dhowaan xabsiga u taxaabtay dad reer Jarmal ah iyo dad kale oo siminaar kaga qayb galayay gobalka Marmara ee dalkaasi Turkiga.
Dadka la xiray waxaa ka mid ahaa mas’uul ka tirsan hay’adda u dooda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International.
Khilaafka Turkiga iyo jarmalka ayaa bilowday bilo ka hor ka dib markii mas’uuliyiin ka Turkiga loo diiday inay Jarmalka ka sameeyaan alolalihii aftidii dad wayne ee ka dhacday dalkaasi.
Turkiga ayaa dhankiisa ka aarguray Jarmalka isagoo dalka u diiday in ay inay soo galaan xildhibaano Jarmal ah oo doonayay inay booqdaan askartooda Ku sugan dalka Turkiga kuwaasi oo qayb ka ahaa isbahaysiga dagaalka kula jira kooxda Daacish ee uu hogaamiyo Maraykanka.
Jarmalka iyo Turkiga ayaa labadooda ka tirsan gaashaanbuurta NATO.
Previous articleWasaaradda Waxbarashada oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadkii laga qaaday in ka badan 18 kun oo arday
Next articleMadaxwayne Farmaajo ‘Ma aqbalayno colaadda Xeeraale, waxaan u diraynaa guddi xaqiiqo raadin ah’